कोरोनाको औषधि पत्ता लगाएको समाचार साँचो कि झुटो? यस्तो छ वास्तविकता ! – Hamrosandesh.com
कोरोनाको औषधि पत्ता लगाएको समाचार साँचो कि झुटो? यस्तो छ वास्तविकता !
काठमाडाैं,६ चैत्र ।
विश्वका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको मुखबाट लिन सकिने ‘भ्याक्सिन’ पत्तालागेको छ।
चीनको थियान चीन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ह्वान चिनहाइको टोलीले सो भ्याक्सिन पत्ता लगाएको हो।
उनी आफैँले विकास गरेको सो ट्याबलेटको चार डोज प्रयोग गरेका थिए। सो क्रममा उनमा कुनै साइड इफेक्ट देखानपरेको उल्लेख छ। साथै सो विद्यालयले उक्त औषधिलाई क्लिनिकल परीक्षण र आम रुपमा उत्पादन गर्नका लागि साझेदारको खोजी गरीरहेको चिनियाँ अंग्रेजी दैनिक अखबार ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।